Saraakiil Sare oo ka tirsan Booliska Qoraxey oo Loo Qabtay Dilkii Liqoowe Muxumed Tayse – Rasaasa News
Apr 17, 2010 criminal, detective, police
Jijiga, rasaas – Wararka ka imanay magaalada Qabridahare, ayaa waxay sheegayaan in loo qabqabtay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka booliska ee gabalka Qoraxeey dilkii Liqoowe Muxumed Tayse, oo habeen dhawayd lagu toogtay gurigiisa dhexdiisa dabadeedna Maydkiisa banaanka la soo dhigay.
Magaalada Qabridahare ayaa waxaa ka dhacay dhawr dil oo sidan oo kale ah, waxaana hore loogu qabqabtay dad ka tirsan maamulka magaalada, kuwaas oo ku xidh xidhan xabsiga Jijiga.
Ciidamada amaanka iyo masuuliyiinta degmada Qabridahare kaliya ayaa haysta hub, kuwaas oo damaanad qaaday in ay ilaaliyaan amaan nafta iyo maalka dadweynaha Qabridahare. Waxaase nasiib daro wayn ah in ciidamadii loogu talo galay in ay ilaaliyaan amaanka magaalada ay noqdaan kuwo iyagu ka qaybqaata amaan darada magaalada.
Ciidamada iyo masuuliyiinta ka hawlgala degaanada Somalida ayaan iyagu lahayn aqoon ama tababar lagu siiyey waajibaadka loo abuuray oo ah ilaalinta nafta iyo hantida muwaadiniinta dalka. Sidaas daraadeed qoriga ay wataan waxay u qaataan in ay ku dhuftaan ruuxii ay isfahmi waayaan ee dadweynaha ka mid ah ama maamulkaba. Waana arinta keenta had iyo goorba in ciidamada amaanka ama masuuliyiinta degaanku ay xabad si fudud ugu dhuftaan muwaadiniin.
Sida ay waraku sheegayaan, waxaa dilkii Liqoowe loo qabtay taliyihii Booliska gabalka Qoraxey [Korahae police commisioner], waxaa kale oo isna la qabtay taliye xigeenkii Booliska [Korahae depute police commissioner] iyo waliga dambi baadhihii gabalka Qoraxey [korahae chief criminal detetcive].
Waxaa kale oo iyana ay baadhid xoog leh ay ku socotaa madaxda maamulka ee gabalka Qoraxey iyo kuwa degmada Qabridahare.
Waxaana baadhitaanka wada baa la yidhi ciidamada fadaraalka Itobiya ee jooga degmada Qabridahare oo iyagu aaminsan in dilka Liqoowe ay ka dambeeyaan masuuliyiinta gabalku.
Wixii war dheeraad ah ee ka soo kordha arintan dib ayaanu idiinla soo socod siindoonaa.